Bireed-PE-xidhkii dahaarka bireed dahaaray |
Meiyuan wuxuu leeyahay 30 sano oo waayo-aragnimo ah soo saaridda cajalad bireed aluminium ah .Waxaan soo saari karnaa .Film-aluminium dhinac-dhinac ah Wajaha, Waji-alwaax-dhejiska aluminium-adag oo la xoojiyay, iyo Foil-PE-xidhkii laminated, multilayer aluminium polyester foils-ka isku-dhafan si loogu dhejiyo ama loogu daro kuwa kale warshadaha dahaarka
PE Laminated Alu Foil wuxuu leeyahay milicsiga wanaagsan, sifooyin farsamo oo xoog leh, iska caabinta ilmada oo aad u sareysa, dahaarka wanaagsan iyo guryaha iska caabinta cimilada oo ay weheliso dareen jilicsan.
Waxaa si weyn loogu isticmaalaa baakadaha warshadaha, baakadaha mashiinnada, dahaarka saqafka, derbiga iyo saqafka, waana boodh iyo caddeyn shucaac.
Saqafka, Dhulka hoostiisa, Dahaarka hoostiisa ee la taaban karo;
Attic, Meesha Gurguurashada, Darbiga Daran, Nadiifinta Dhismaha Birta.
Dahaarka difaaca ee tuubooyinka hawo -qaadista, Tuubada HVAC & Tuubada;
Qolofka hawo qaboojiyaha iyo kululeeyaha biyaha.
Wixii storge: sida kaydinta xamuulka
Dhammaan ujeeddooyinka daboolka: daboolka dhulka, daboolka baabuurka, daboolka markabka, daboolka trailer, daboolka qalabka, daboolka goobta dhismaha
Wixii shiraacyada, shiraacyada, saqafka, qorraxda, qorraxda, hoyga degdegga ah
7mic Aluminium -bireed/PE/dhar -xidhka
Iska caabinta daxalka, milicsiga wanaagsan, sifooyinka farsamada oo xooggan, iska caabinta ilmada oo sarreysa, oo leh dareen jilicsan.
7mic Aluminum -bireed/PE/dhar -xidhka/PE/
7mic Aluminium -bireed
Nadiifinta iftiinka leh ee labada dhinac leh iyo iska caabbinta daxalka oo leh sifooyin farsamo oo xoog leh iyo iska caabinta ilmada oo sarreysa.
Haddii aad leedahay baahiyo la xiriira PE Foomka Laminated Alu Foil, fadlan nala soo xiriir, Waxaan noqon doonnaa waqtiga ugu dhaqsaha badan si aan kuu siino badeecadaha ugu fiican, ku soo dhowow inaad soo booqato shirkadeena!
S: Ma heli karaa shaybaarro tijaabo ah ka hor inta aanan dalban?
J: Haa, waxaan ku siin karnaa xoogaa shaybaarro bilaash ah oo tixraacaaga ah haddii aad jeclaan lahayd inaad qaadato kharashka cad.
S: Waa maxay cabbirrada aan u baahanahay inaan bixiyo si aan u helo xigasho sax ah?
J: Waxaad u baahan tahay inaad bixiso dhererka, ballaca, dhumucda iyo tirada alaabta. Waxaan ku siin doonaa qiimaha ugu fiican iyada oo loo marayo macluumaadka aad bixiso.
S: Waa maxay waqtiga hogaanka?
A: Badeecadaha la habeeyay, waxaan kuu diyaarin doonnaa amarka si waafaqsan tirada dalabka oo waxaan kuu xaqiijin doonaa waqtiga dhalmada adiga.
Hore: Cajaladda Korontada ee PVC
Xiga: Dahaarka-bireed dahaaray dahaarka bireed
Intertape Polymer Group Aluminium -bireed, Sidee u Kululaan Kartaa Cajaladda Fiilooyinka Aluminiumka, Aluminium -bireed -Muraayadda Muraayadda Muraayadda, Sharooto, Wejiga Labaad ee Xoojiya Aluminium-ka Wajahaya, Fiilooyinka Aluminium ee Hal-dhinac leh,